ताङ्सेको भिरबाट गोठालाहरूसँग एसएमएस | मझेरी डट कम
HomSuvedi — Tue, 11/18/2014 - 06:49
नागशैय्या निबन्ध सङ्ग्रह
उता मेरा वर्तमानको वासथलोमा मेरा केही सरकारी कर्मचारीहरू पनि छन् । उनीहरूले १० देखि ४ वा ५ बजेभित्र ता सरकारको तलब खाएबापत काम गर्नु पर्ने हो । काम कम गर्नु र घुस अघिक खानु उनीहरूको अभ्यासको विषय हो । यदि त्यसरी घुस खान पाइएन भने उनीहरूले अफिसको समयमा गर्नु पर्ने काम कुराहरूलाई जानेसम्मका उपायहरू गरेर छिरोलेर बिगार्छन् र छाडिदिन्छन् । अनि घुस मिलेन भने भोलिपल्ट पनि आलेटाले गरेर काम बिगार्दै अफिसको समय सक्छन् । आफैंले जानी जानी बिगारेको र बिग्रिएको कामलाई सपार्न भनेर माग फारम भर्छन् र ओभर टाइम खाएर फेरि सपार्छन् । यस्ता चोर खन्चुवा केही दौंतरीहरूको काम कुरो देखेर अहिले पनि मलाई उहिले हाम्रो घरमा भएको राघी गाईको सम्झना झल्झली आउँछ । यो कुरा उति सारो पुरानु पनि होइन । चोर्नमा सारै रिपु थियो राघी गाई । जङ्गलमा गाई बाख्रा चराउन गोठालो भएर जाँदाको सम्झना हो यो । त्यस गाईले हामी गोठालाहरूको दोहोलो काढेको थियो आजका कर्मचारीहरूले जनतालाई दोहोलो काढेझैं । हेर्दाहेर्दै विजुलीको गतिमा अघि कता सड्केर अर्काको बाली खाइदिन्थ्यो आजभोलिका जनताका सेवकहरूले जनताबाटै घुस खाएजसरी । मलाई अबगाल, गाली कुटाई समेत कति खुवाएको थियो थियो त्यस गाईले । त्यस गाईलाई थलो सुक्सुकाउँदो कहिल्यै पार्न सकिएन । फनफनी घुमेर, गोब्¥याएर, गहुँत्याएर अनि धलो भरी फन्को मारेर सारै फोहोरो पार्दथ्यो । उति हान्दैनथ्यो त्यस अर्थमा गुनी थियो । तर सारै चोर । त्यो राघी गाईको प्रकृति आजका सबैजसो र सबैतिरका कर्मचारीहरूमा देख्छु । त्यो दिन मलाई त्यही गाई चराएको भिर र त्यसले चोरेर खाएका पखेरा र पाखातिर जान मन लागरिहेको थियो । पचास वर्ष पछि ।
त्यतिखेर म गोठालो थिएँ । गाई गोठालाको दिनचर्या के हुन्थ्यो र ? गाई भैंसी दुहुनु, थलाको गोबर सोहोर्नु, गाई चराउन जङ्गलतिर लानु, तिनलाई राम्रंरी अघाउन्जेल चराउनु, नहराई साँझमा घरमा लिएर आउनु, घर फर्कंदा सकेदेखि घाँसको भारी र नसके गाईको लागि ओच्छ्याउने सोत्तर मात्रै भए पनि लिएर आउनु, बाछापाडा गर्नु, घाँपानी गर्नु आदि ता हुन्थे । यी बाहेकको अरुे कुनै दिनचर्या गोठालाको गाई खर्काउन लाँदा हुँदैनथे कमसे कम मेरा थिएनन् । आज म त्यही खर काटेको गाई खर्काएको, अरु धेरै गाईहरूसँग राघी गाई चराएको र गलेनी र कटुस टिपेर खाएको भिरमा छु । मैले आज भन्दा पचास वर्ष अघि गाई चराएको, खर काटेको, घाँस काटेको र भारी बोकेको भिरमा मैले आज पाइला टेकें । यो भिर देखेर मलाई अलिक अनौठो लाग्यो । यस बाजीको मेरो पैत्रिक भिरको र घरको यात्रामा त्यही चोर राघी गाईको सम्झना आयो । त्यही भिरको बाटो गरेर म अर्काे गाउँमा जाँदै थिएँ, त्यही राघी गाईले चोरेर बाली खाएको छिमेकीको बारीबाट जाँदै थिएँ । बारी उही, वन उही, डाँडापाखा उही, हरियाली उही, सल्लो घारी उही, ऐसेलु पाकेका छन्, काफल पाक्न लाग्दैछन्, सल्लाका सिम्टा खसेका छन् । सबै सबै उही उही खालका छन् तर म भने फरक छु । अहिले म फुलेको छु, कपाल झरेको छ । उस बेलाको जस्तो गरी भिरमा हिंड्न सक्तिन । ममा फरक भएर पनि यहाँको भिरमा उति फरक देखिनँ । कतै कतै गाईबाख्रा चरिरहेका पनि छन् । अप्ठेरोमा बाख्राहरू घाँसका पिपिराहरू टिपेर चरिरहेका छन् । तर गोठाला भने मैले देखिनँ । किन गोठाला छैनन् हँ ? विना गोठाला गाईबाख्रा मात्रै अचेल चर्छन् कि क्या हो ! मलाई अलिक छक्क लाग्यो ।
“अङ्कल !” एक बालिका गोठाल्नीले त्यस भिडबाट मलाई सोधी । ऊ १०, १२ की हुँदी हो । हेर्दा बडो प्यारी, थाम्मथुम्म परेकी, कपाल बाटेकी, रामै्र लुगा लाएकी र निकै हिसी परेकी थिई ।
म चकित परें । मैले गिठ्ठा र भ्याकुर खाएर रिंगेको यो भिरमा, मैले कलेटी परेको ओठ लिएर एक्लै हिंडेका यस भिरमा आज यस शैलीका बालबालिका ! आजका गोठालाहरूका हातमा मोबाइल ? मैले पानी पनि गुएँलाको धोद्राको पिएर खर काटेको यस ताङ्सेका भिरमा पानीको धारो ? एउटा खबर एक गाउँबाट अर्काे गाउँमा पुग्न तिन दिन लाग्ने यो गाउँ र भिरहरूबाट एसएमएस ? मैले ‘तिमी’ भन्दा माथिल्लो दर्जाको भाषै नजानेको यस ठाउँमा आजका बालबालिकाहरूमा मुखमा तपाईं र हजुर भन्न थालेका छन् रहेछन् । ‘हजुर !’ शब्दले मलाई सम्बोधन ! म तिन छक्क परिरहेको थिएँ । यहाँ ता आज मोबाइल पो आइपुगेछ ! कस्तो अचम्म ! आज गोठालाको हातमा मोबाइल, श्रमिकका हातमा मोबाइल ! समय निकै माथि पुगेको लाग्यो मलाई । अझै मसँग उक्त बालिकाले आग्रह गरिन् । अनि मैले एसएमएस गर्ने तरिका सबैलाई सिकाइदिएँ । र बाटो लाग्न खोजें । तर बालिकाले अझै केही जानिन र मलाई अझै पर्खाई । मसँग अझै केही सिकाइदिने उसको आग्रह आयो । केही क्षण र्पिर्खएँ ।
म साठी बर्सको उमेरमा आज आएर बल्ल बल्ल नयाँ विद्युतीय सामग्रीहरूलाई जानीनजानी उपयोग गर्दैछु । तर मेरा गाउँका बालबालिकाहरूले जन्मैदेखि विद्युतीय माध्यमहरूलाई उपयोग गर्न थालिसकेछन् । मेरो पुस्ताले खाली खुट्टाले हाइस्कुल पार गरेको थियो, आजका बालबालिकाहरू यहाँ पनि टाइ लगाएर बोर्डिङ् जाने ? कति चाँडो युगले काँचुली फेरेर कति माथिसम्म पुगेछ !’ मलाई आफ्नो युगमा पनि यस्तै साधन भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो । मैले ता टेलिफोन भनेको धनकुटाबाट धरानसम्म फलामे तार टाँगेर पु¥याएको मात्र देखेको थिएँ । त्यसबाट कसरी बोलिन्छ थाहा पनि थिएन । पहिलो पटक कालिम्पोङमा हो मैले टेलिफोनको सेटबाट कसैसँग कुरा गरेको ।
“हजुर ? मम्मी ! किन फोन ग¥या ?” उसले सोधी ।
“गुड आप्mटर नुन सर ।” केटीले भनी । अनि उसको कुराबाट मैले थाहा पाएँ, उसले भोलिपल्ट डिबेटको तयारी गर्नका लागि उसका सरले हौसला दिइरहेका रहेछन् फोनबाट ।